Hand Ridger for amazambane kanye nezinye izinto zokusebenza dacha
Zonke balimi bayazi ukuthi isikhathi esichithwa messing bezungeza nge nomphumela enamandla kakhulu ku isivuno amazambane. Ngenxa yokuthi ihlume impande eqala ukukhula, phansi nje kuphela, kodwa esandleni akha nezilimo eziyizigaxa eziningi ezinkulu. Ukuze uthole isivuno esikhulu amazambane, Spud efiselekayo yayo emva ngamunye yimvula enamandla noma ukuthambisa luningi.
Kule nkathi intuthuko kwezobuchwepheshe baklama amathuluzi amaningi imishini yonke imisebenzi okhandlayo elihlobene ne-yokwemba. Hilling amazambane akuyona ngaphandle kulokhu. Ngo ayatholakala emakhemisi njengoba amathuluzi ngokuzenzakalela ne manual, senzelwe le njongo. Hand Ridger for amazambane kungaba ukhetho best kokubili intengo kanye nokusebenza.
Kukhona onobuhle eziningi imishini zenzelwe ukusetshenziswa ngumuntu oyedwa noma abantu ababili. Njengoba lokhu ngokuvamile kusetshenziswa ithuluzi empeleni kuphela ridging kodwa amazambane zokutshala (ukusika uchungechunge). Hand Hiller amazambane yidivayisi isakhiwo kahle elula lapho kufakwe umzimba dvuhotvalny unikezwe ummese Undercut futhi inhlukano ukwelula isibambo nasentanyeni, axillary umphelelisi iyiphi impahla nezimo. Ngezinye izikhathi la mathuluzi anemisila traction misa, eyenzelwe abantu yalandela wakwazi baphoqelele nabo.
Ikhishwa amakhanda efanayo kanye motor amabhlogo. Ngamagama imishini umsebenzi engadini - ngokuqinisekile ukhetho ekahle kunazo. Nokho, kukhona i-walk ngemuva kuzo zonke wemboni, nokuthenga yayo ingandiza ku nesenti. Kulokhu, ikhambi elifanele kakhulu kungaba yokufuna ithuluzi ezifana ngesandla Ridger for amazambane. Ikakhulukazi uma ingxenye incane - ku ezahlukene 4-6 ehektheleni.
Uma endaweni ukuphathwa ngayo iphakeme kakhulu kunanoma lesi sibalo, yebo, kungcono ukushintsha ngokugcwele umsebenzi wakho. Ngesikhathi esifanayo kuwumqondo omuhle ukuthi ucabangele ukuthenga imishini efana ungumlimi. Nale imishini kungenzeka ukuba afeze ezihlukahlukene umsebenzi yokwemba, achithe ngomzamo omncane kakhulu. Ake sibheke indlela ukukhetha umlimi kuyinto elula kakhulu endaweni ngayinye ethile.
Le nqubo ingase ibe amandla ezahlukene kanye nesisindo, kanye zihamba ngophethiloli, nge kagesi noma diesel. Ngokukhetha, njengoba kwaba njalo endabeni yokuqala, akudingeki ukuqondiswa ngokuyinhloko lemali yezwe. Ukuze izingadi ezincane ephelele ungumlimi kagesi. onobuhle ezinjalo ukonga, cishe akukho umsindo futhi akazange zingcolisa indawo esizungezile.
Ukuze izingxenye ezinkulu isixazululo enkulu kungaba ngophethiloli noma udizili ithuluzi, ezifana isibonelo ungumlimi "Tarpan". Lena imishini enemisebenzi ngempela ukuthi singasetshenziswa exhunywe uma oyifunayo ne wotshani, futha amanzi, shredder imfucuza, njll Injini ugijima on uphethiloli, lunamandla ka 6 l / s, kangangokuthi ngisho inhlabathi esindayo isiqinti 6 ihektha ungelashwa ihora elilodwa nje.
Ngamunye umnikazi yensimu ngokwayo enquma onjani imishini ngeke ivumelane kuye engcono - Super kwezomnotho, ezifana isib ngesandla Ridger for amazambane, noma cishe aqede isidingo umsebenzi wezandla, kodwa eqolo ngokwezezimali, ezifana umlimi noma ukuhamba-ngemuva ugandaganda.
Kunoma yikuphi, uma uthenga noma iyiphi yalezi zinhlobo amathuluzi zanamuhla kakhulu lula umsebenzi futhi iholide, ngokulandelana, ukuze uthole isivuno esihle, ngemali umzamo ingasaphathwa.
Intshe Ipulazi (Perm): incazelo kanye izinkambo
Blue Duck ozithandayo - incazelo zohlobo futhi kulinywe
Hereford izinkomo: ikakhulukazi zizalela, okuqukethwe, izintengo izilwane ezisencane kanye zizalela
Candling amaqanda. Candling amaqanda izinsuku
Can izinkukhu amaqanda ngaphandle iqhude? Ingabe izinkukhu amaqanda ngaphandle iqhude?
Indlela ukuhlukanisa abesifazane kusukela kwabesilisa amaphuphu? amaphuphu day ubudala
Izingane ezinomusa kakhulu zokunambitheka kwezingane zabafana
Amandla osteochondrosis: okunempilo, ukudla, amamenyu, zokupheka
Amafutha Russian kanye negesi Imboni
Kanjani ukufunda amanothi: amathiphu ambalwa mfunda-makhwelo abaculi
Meaning of igama elithi "nhlonhlo". Siyini "izicathulo amagejambazo 'futhi' lilula uqhekeko uye yafinyelela?"
Amaranth - Ikusasa Imbali
Uma une mitral valve prolapse, thatha ukuthi ebuthweni?
Recipe isinongo horseradish. Izikebhe horseradish ebusika
Zincipha kwezitho zomzimba: Izici
Ubugovu - Iyini? Lona igama elifanayo nezibonelo. Ukuzethemba nokuzihlonipha, ngokuba nezingxabano uthando